Ilay andro mialohan’ny farany : Tonga ny Vazaha – Vahatra sy Elatra
Ce qui suit est extrait d’un roman que j’écris ou que je peine à écrire. Outre le travail chronophage de recherches et la difficulté du malgache, langue merveilleuse et policée à l’envi, je me suis rendue compte qu’il est impossible de travailler sur le personnage de Ranavalona en se basant uniquement sur des recherches historiques et chronologiques, froides et sans âme. Il me semble qu’elle dépasse cette démarche « scientifique » et que vous devez/je dois…la… « ressentir ».. Ceci est une fiction. Extraits.
« Tonga ny Vazaha »
Toa nibaby haromotona ny lanitra. Rahonkitroka no taterin’ny rivotra matevimbovoka, mifofofofo manerana ny tanàna, mitarika hatezerana sy tahotra. « Tonga ny vazaha« . Gaigy izany. Maina sina tsy nahaloambolana i Sosa, nitolefika teo ambavahadin-drova, reraky ny fimaona nihanika ny havoana. Niriotra nibosesika ireo ambanilanitra nitady fierena eny ambany elatr’andriana, ka dia anjatony no tomefy teo an-tokontanindrova raha nigadona teny i Sosa. « Tonga ny vazaha« .
Anatirovan’Antananarivo – ANTA
Nitampify no hany sisa natao, niankinankindrindrina, nihenjihenjy tsy hita varany. « Mitonia ianareo« , izay no teny nidina koa dia niezaka nandamintsaina. Kanefa moa, ratsy dia ratsy hatrany ny vaovao taterin’ireo vatandehilahy ombieny ombieny. Koa dia samy niondrikondrika, namisavisavisa izay higadona, na ho basy, na ho tafondro. Tsy mba nisy horesahana i Sosa, fa izy irery tsinona, ny azy rehetra efa tsy namana intsony. Nihoronkoditra tampoka ny zazavavy. Tena izy irery monja sisa.
(…) Extrait coupé
I Sosa irery no hany sisa tavela. Nipenimpenina tsy nahita izay hametrahana ny tenany ireo mpanompo fito mianaka izay nonina tao aminy. Toa hobaka ny tranobe nijoalajoala eo Faravohitra, lapa kely nahatamàna fahiny nahorin’Ikaky. Vao nipariaka ny vaovao dia efa nihaodihaody koa ireo goaika mpihaza tapaporohana ary nilefalefa toy ny tsy nahafantatra ireo nanatrosa tsy voahefa tamin’Ikaky. Tsy dia nahoan’i Sosa izany, tsy nanana fotoana hisaonana ny alahelon-drainy sy zokiny akory izy, fa nibahana tato an-tsainy ny loza nanakaiky hatrany ny tamponkavoana : tsy voatohitra intsony hoe ny vazaha, tsy afa-nihetsika intsony hoe ny tafika…Nozarainy hena nasaly sy vary eran’ny kitapo ary vola avy ireo andevony fito mianaka, « raha sendra misy ny antambo ka voatery hisara-monina isika« . Nifendrofendro fotsiny sisa ireto mpanompo. Tao anatin’ny roa andro izay dia re niraondraona tany ho any ny kanonta be ary lelantsetroka sy sangan’afo dorehitra no mihazakazaka mifanenjika. Tsy fantatra intsony na ny ankilany na ny andaniny no voa na nahavoa, fa ny tabataban’ny tafondro fahambody no manjenjina ny sofina sy saina. Io maraina io, mbola tsy vaky andro akory dia efa korontana sy horakoraka mameno an’Antananarivo : « Tonga ny vazaha« .
Vehivavy, zokiolona ary zaza tena madinika no betsaka niery teny an-drova, fa ny lehilahy sy ny tanora matanjaka, na tsia koa aza, niantafika avokoa ny ankamaroany. Samy kaody teo ampiandrasana ny tohin’ny tantara manao tazandavitra ny fifanjevoana : « Efa manao izay faraheriny ireo miaramilantsika fa mitonia« , hoy ny teny avy any ambony. Kinanjo, teo no tsy nampoizina. Zerabaomba! Sioka mafy avy eny atsinana eny, nihamafy hatrany ary dia nidaraboka teo Anatirova. Fipoahana mankarenina, toa nidoboka hatreny amin’ny ambavafo. Nitsingidina, nipitika sy nianjera ny olona. Nisavoana ny vovoka, nikodiadia ny rindrimbaton’ny tamboho. Tsy nifankahitàna ny tabataba sy ny vovoka. Feo mitoreo sy hiakiaka no nanohy ny zerabaomba voalohany. Tafapitika tery ambanin’ny fitomiandalana i Sosa, nipararetra toy ny ravinkazo ny rantsambatany ary nisafotofoto toa ranomasimbe anaty tadio ny fony.
Ranavalona III – Archives nationales
Nipendrampendrana aloha ny masony, tsy afa-nijery. » Maheno ve ianao? » hoy ny akon’ny feo mipatrana any ho any. Nokosehan’i Sosa ny masony. Tsapany nisy tanana nampiharina azy moramora. « Maratra ve? » hoy ity feo. Niharina moramora i Sosa. Feno olona be dia be mifamoivoy manodidina, mihosondrà ny betsaka. Nihanahana kely izy. « Raha tsy maratra dia mitsangana, azafady, hikarakara ireo maratra« , hoy ihany ity feo, sady nitsangana niaraka tamin’izay ilay tompony. Gina kely i Sosa, nazava ny masony. Ny mpanjaka ity. Mitondra valonandamba maromaro izy, amin’ny tanany havia ary mihosombovoka sy rà ny akanjony. « Mitsangàna », hoy ihany Ranavalona, hentitra. « Avia, hanampy ahy »
Image à la une : Ranavalona III et sa famille dans son guétali réunionnais, rue Roland Garros, St Denis, mars 1897/nov1898, Photo IHOI
25 Jan 2018 17 Oct 2018
Gladiateur en robe de velours
4 réflexions au sujet de « Ilay andro mialohan’ny farany : Tonga ny Vazaha »
Vahömbey dit :
26 Jan 2018 à 10:33
Tsoatiavina2002 dit :
25 Jan 2018 à 18:26
Hafa ihany ny mahay manoratra…
Mpamaky teny dit :
25 Jan 2018 à 14:19
henjana izany teny gasy izany, EDA no fetra! Liana hanaraka ny tohiny
Voasary Lalaina dit :
25 Jan 2018 à 08:51
Kay!!! Talenta miavosa!!!!